Waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waxaan u malaynayaa in aan jeclahay wiil kale. Ma tahay midaasi mid mamnuuc ah ama reeban? Maxaan samayn karaa? – Tips for refugees
Previous Previous post: Ilmo adeerkayga (labb, 22 sanno jir ah) ayaa iga taabtay aniga oo ah gabar (dheddig, 13 sanno jir ah) lugahayga hoostooda xubintayda taranka. Laakiin anigu ma doonayo in uu i taabto. Maxaa dhacaya haddii aan qof u sheego?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno-jir ah. Dhakhtarkayga ayaa i weydiiyay in la i guday iyo inkale. Maxaa laga wadaa midaasi?